ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့မိခင်နဲ့ အတူနေပေမယ့် ကူးစက်ခြင်းမရှိလို့ ကလေးစားနေကြအစားအစာတွေကို မေးကြည့်လိုက်သောအခါ……. – Shwe Yaung Lan
[ January 16, 2022 ] မောင်နှမတွေလားလ်ု့ိတောင်ထင်ရလောက်အောင် အံ့ဖွယ်ရုပ်ဆင်တဲ့ ကမ္ကာကျော်များ	SYL Amazing Photos
[ January 16, 2022 ] ဒီတစ်ခေါက်ကလွဲရင်နောက် ဘယ်တော့မှမြင်ခွင့်မရတော့မယ့် ပုံများ	SYL Amazing Photos
[ January 16, 2022 ] လောဘကြီးတဲ့ လူတွေအတွက် သူတောင်းစားတစ်ယောက်ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ	News
[ January 16, 2022 ] သဘာဝကြီးရဲ့ ဆန်းကြယ်မှုတွေကို တစ်နေ့တစ်ခြားမြင်ရသောအခါ	SYL Amazing Photos
[ January 16, 2022 ] ” ပညာတတ်နဲ့ ပညာရှင် ” တို့၏ ကွာခြားချက် (မှတ်သားထိုက်ပါတယ်)	News
HomeKnowledgeကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့မိခင်နဲ့ အတူနေပေမယ့် ကူးစက်ခြင်းမရှိလို့ ကလေးစားနေကြအစားအစာတွေကို မေးကြည့်လိုက်သောအခါ…….
ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့မိခင်နဲ့ အတူနေပေမယ့် ကူးစက်ခြင်းမရှိလို့ ကလေးစားနေကြအစားအစာတွေကို မေးကြည့်လိုက်သောအခါ…….
August 26, 2021 SYL Knowledge 0
ကိုဗစ်ျဖစ်နေတဲ့ မိခင္နားမွာဘဲ အမြဲကပ်နေတဲ့ ၈နွစ် ကေလး ကူးစက်ျခင်းမရွိလို့ ကေလး စားနေကြအစားအစာကိုမေးကြည့်လိုက္တဲ့အခါအေမက ကိုဗစ် ျဖစ်ပေမယ့် မောင်လေးက ကိုဗစ္မကူးခဲ့ပါဘူး။
ကေလးက ၈ နွစ္ပဲ ရွိပါသေးတယ်။အေမတိူ့ ဆေးရုံမွာသြားနေရတုန်းကလဲ မောင်လေးပါ ပါသြားတာပါ။ကေလးကငယ္တဲ့အျပင် အေမနားပဲ ကပ်နေတာမို့ ရောဂါကူးနိုင်ေျခအမ်ားဆုံးလို့ ယူဆကြပါတယ္နဲ့ပဲ ကေလးက ကိုဗစ္လက္ခဏာ ဘာမွ မျပေသးပေမယ့်ရုတ္တရက္မ်ား
ညကြီးမိုးခ်ုပ် တစ္ခုခုျဖစ္လာရင်သြားရ လာရအဆင္မေျပမွာစိုးလို့ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ အကြံပေးခ်က်အရ ကေလးကိုပါ အေမနဲ့အတူ ဆေးရုံမွာ ထားခဲ့ရပါတယ်အခု အေမျပန်ကောင်းပြီး ဆေးရုံကဆင်းလာတဲ့အထိ မောင်လေးက ဘာမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။
အိမ်ျပန်ရောက္တဲ့အထိလဲ ကေလးက အေကာင်းပါ။သူစားနေကြ ကေလးအားဆေး ဗီတာမင္စီ ကလြဲရင် ဘာဆေးမွ မတိုက္ခဲ့ မေသာက္ခဲ့ရပါဘူးကေလးက နဂိုထဲကခ်ူခ်ာသူ နုနုလေးမို့ သူ့ကို စိတ္ပူခဲ့ပေမယ့် သူက ကြီးကောင်ဝင္လာတာကြောင့် အရင္ထက် အစားပိုစားခိန်ျဖစ်နေတာမို့ ကိုယ္ခံအားကောင်းနေလို့ ပဲ ထင္ပါတယ် မကူးခဲ့ပါဘူး
။ဆေးရုံမွာ Q ဝင်နေစဉ္တေလွ်ာက္လဲ အျပင္လဲ မထြက်ရအခန်းထဲနေပြီး ကေလးက လုပ္စရာမရွိတော့ အားနေ မုန့္မိုးစုံ အစားမိုးစုံ ထမင်းရော ဘာရော အကုန္စားနေတာပါအားရွိနေတာမို့ ကိုယ္ခံအားကောင်းနေတာမို့ပဲ ကေလးကမကူးခဲ့တာထင္ပါတယ်
။ဆေးရုံမွာနေတုန်းက ကိုဗစ္စင္တာသီးသန့္မရွိသေးတာကြောင့် အခန်းလြတ္တစ္ခုမွာ ကေလးရယ် အေမရယ်။သူ့ယောင်းမရယ်အျပင် တျခားကိုဗစ္လူနာတြေနဲ့ပါ တစ္ခန်းထဲကို ၂ ပတ္တိတိ အတူနေခဲ့ရတာပါဒါတောင္မွ ကေလးက ကိုယ္ခံအားကောင်းနေလို့ မကူးခဲ့ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ကိုဗစ္ကိုကြောက်ရင် ကိုယ္တိုင်ရော…ကေလးသူငယ္နဲ့ လူကြီးတြေကိုပါ အစားအေသာက္ကို ဂရုတစိုက်ေြကြးမြေးကြပါ။ျဖစ္လာရင္လဲ ကိုဗစ္ကိုတိုက်နိုင္ဖို့က ကိုယ္ခံအားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်အားရွိဖို့ ငွက်သိုက်တြေခ်ည်း တိုက္စရာမလိုပါ။
ထမင်း ဟင်းနဲ့ အာဟာရရွိစေမယ့် အသားငါးအျပင် ကြက်ဥျပုတ် ငုံးဥျပုတ် ကန္စြန်းဥျပုတ် ရွှေဖရုံသီး အာလူး ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ..ဟင်းနုနြယ် ..စတဲ့ အသီးအရြက်တြေက်ုလဲ အလွည့္က် ခ်က်ျပုတ်ေြကြးကြပါ။
Credit @ Tharaphi Maung
မောင်နှမတွေလားလ်ု့ိတောင်ထင်ရလောက်အောင် အံ့ဖွယ်ရုပ်ဆင်တဲ့ ကမ္ကာကျော်များ
ဒီတစ်ခေါက်ကလွဲရင်နောက် ဘယ်တော့မှမြင်ခွင့်မရတော့မယ့် ပုံများ
လောဘကြီးတဲ့ လူတွေအတွက် သူတောင်းစားတစ်ယောက်ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
သဘာဝကြီးရဲ့ ဆန်းကြယ်မှုတွေကို တစ်နေ့တစ်ခြားမြင်ရသောအခါ
” ပညာတတ်နဲ့ ပညာရှင် ” တို့၏ ကွာခြားချက် (မှတ်သားထိုက်ပါတယ်)